Xuska sannadguurada 11-aad ee aasaaskii Puntland oo maanta si heer sare ah looga xusay magaalada Bossaso. [Akhris …] – Radio Daljir
Xuska sannadguurada 11-aad ee aasaaskii Puntland oo maanta si heer sare ah looga xusay magaalada Bossaso. [Akhris …]
Bossaso, Aug 01 – Xuska munaasabadda 11aad ee ka soo wareegey aas-aaskii Puntland ayaa maanta si wayn loogu qabtay dhammaan degaannada dowladda Puntland ee Soomaaliya.
Dabbaaldagga munaasabaddan ayaa saaka si aan waligeed hore loo arag looga xusay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland.
Saaka magaalada Boosaso waxa ay ku waabariisatay jawi ka duwan kuwii hore, waxaana qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada oo ay wajiyadooda ka muuqato farxad la dheehan karo ay ku kallaheen gegida kubbadda cagta ee magaalada Boosaaso, halkaas oo ay ciidamo, iyo fannaaniin halkaas sii tagay xilli hore oo saaka ah ay jaantus qurux badan ka sameeyeen, waxana halkaas qudbado hor dhac ah ka jeediyay madaxda gobolka Bari, inyar kaddibna waxaa loo dhaqaaqay xarunta dowladda hoose ee magaalada Boosaaso, halkaas oo ay ka dhacaysay xaflad munaasabaddan loogu talo galay oo si heer sare ah loo soo agaasimay.
Waxaa saaka aan la furin qaybaha kala duwan ee ganacsiga, taasoo ay sabab u ahayd munaasabadaha kala duwan ee maalintan loo sameeyey.
Boosaaso waxa ay maanta dabbaaldaggan la qaybsatay magaalooyinka waawayn ee Puntland sida Garoowe iyo Garoowe oo munaasabado aan hore looga arag ay ka dhacayeen.
Dadka ku dhaqan Boosaaso kuma aanay koobnayn la socoshada munaasabadda Boosaaso oo kaliya e waxa ay idaacadda Daljir si toos ah ugala socdeen munaasabadihii sida wacan loo soo agaasimay ee ka dhacayay dagaannada kale ee Puntland.
Dabbaal dagga munaasabaddan ayaa ahayd tii ugu waynayd ee dhacda tan iyo markii la aas?aasay Puntland muddo imika laga joogo 11 sanadood.